सीआईएका मान्छेसँग रसपान गरेर मलाई आरोप लगाउने? स्पेसखबर
‘अबको तीन वर्षमा फूलमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन्छौं’ यसवर्ष माग हुने २२ लाख मालामध्ये १५ लाख माला सयपत्री फूलका हुन् । तीमध्ये १२ लाख माला नेपालकै हुन् भने ३ लाख माला भारतबाट आयात गर्नुपर्छ । नेपाल मखमली ...
हामी निर्माण व्यवसायी हौं, ठेकेदार होइनौं हामी निर्माण व्यवसायी हौं, ठेकेदार होइनौं। हामी निर्माण कार्य गर्छौं। त्यसैले हाम्रो जिम्मेवारी पनि निर्माण कार्य गर्ने हो। नेपालको ६० प्रतिशत काम निर्माण व्यवसायीले गर्छन्। र, त्यस कामको पनि ...
अन्तर्वार्ता संविधान संशोधनको पक्षमा बहस गरौं निर्वाचनमा भाग लिएका वा नलिएका दलहरुले छिटपुट रुपमा संविधानबारे केही कुरा राख्न सक्छन् तर उनीहरुले संविधान नमान्ने नाममा बिखण्डनतिर लाने कोशिश गर्ने मनसायको गठबन्धनमा देखिने गरी तिनको साथ दिन्छन् ...
संघीयता विफल बनाउने तानाबाना त बुनिदैछैन? स्थानीय तहका अधिकारीमा काम गर्ने क्षमता भएन भनेर अधिकार फेरि पनि केन्द्रीकृत गराउन खोजिँदैछ। विकसित घटनाक्रम हेर्दा संघीयता विफल गराउने तानाबाना त बुनिदैछैन भन्ने मलाई पनि आशंका लाग्न थालेको ...
हामीलार्इ सरकारले कमजाेर नठानाेस् 'हामीले हाम्रो मुद्दा बिर्सिएका छैनौं, समय आएपछि त्यसका लागि पहल गर्ने गर्छाैं। राजपा अहिले पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ। सरकारका क्रियाकलाप नियालिरहेको छाैं।'
केन्द्र सरकारसँग संघर्ष गर्न नपरोस् एकअर्काको अस्तित्वलार्इ सम्मान गर्नुपर्छ। मधेसी जनता नेपाली नै हुन्। त्यसैले नेपाली भावना अनुरूप नै हाम्रा कठिनाइ केन्द्रले बुझ्नुपर्छ।
सत्तामा बसेर क्रान्तिकारी हुन गाह्रो रहेछ विपक्षी भएर सरकारलाई यसो गर, उसो गर भन्न धेरै सजिलो रहेछ । सत्तापक्ष भएर काम गर्न बडो गाह्रो कुरा हो । म त क्रान्तिकारी अभियानमा लागेको मान्छे सत्तामा बसेर ...